धनकुटामा मध्यराती ढोका फुटाएर महिलामाथि बलात्कार प्रयास, प्रतिकार गर्दा युवाको मृत्यु – Chautari Online
धनकुटामा मध्यराती ढोका फुटाएर महिलामाथि बलात्कार प्रयास, प्रतिकार गर्दा युवाको मृत्यु
October 16, 2020 260
धनकुटा । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–१ घुमाउँनेमा एक महिलाले आफुमाथि बलात्कार प्रयास गर्ने पुरुषको हत्या गरेकी छन् । घुमाउँनेकी ३० बर्षीया कमला गुरुङले स्थानीय लीलबहादुर गुरुङको हत्या गरेकी हुन् ।
लीलबहादुरले बलात्कार प्रयास गरेपछि महिलाले प्रतिकारमा खुकुरी प्रहार गर्दा उनको मृत्यु भएको पाईएको धनकुटाका प्रहरी प्रमुख गोबिन्द अधिकारीले संगालोखबरलाई जानकारी दिए । ‘राती ढोका फुटाएर आफुमाथि बलात्कार प्रयास गरेपछि खुकुरी प्रहार गरेको महिलाले बयान दिएकी छन् । हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानले पनि बलात्कारको प्रतिकारमा हत्या भएको देखिएको छ ।’ एसपी अधिकारीले संगालोखबरसँग भने–‘मृतकको शवलाई पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पतालमा ल्याएका छौ । महिलालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर घटनाको बिषयमा थप अनुसन्धान गर्दैछौ ।’
घटना मंगलबार राती करिब १० बजेको हो । कमलाको भनाई उदृत गर्दै स्थानीय हस्तबहादुर मगरले दिएको जानकारी अनुसार राती कमलाको घरमा गएर लीलबहादुरले ढोका ढकढकाएर खोल्न आग्रह गरे । भित्रबाट नखोलेपछि बाहिरबाटै ठेलेर चुकुल उक्काई भित्र पसेर लीलबहादुरले कमलामाथि बलात्कार प्रयास गरे । सोही क्रममा खुकुरी भेटेर हानेको कमलाले बयान दिएका छन् । खुकुरी प्रहारपछि लीलबहादुर भागेका थिए । टाउकोमा गंभीर चोट लागेका उनको बुधबार बिहान स्थानीय लाहुरे खोल्सीमा शव फेला परेको हो ।
३० बर्षीय मृतक लीलबहादुर विवाहित हुन् । उनका दुई छोरा छन् । श्रीमतीले उनलाई छोडेर करिब एक बर्ष पहिले नै अर्को बिहे गरेकी थिईन् । यता, बलात्कार प्रयास गर्दा प्रतिकार गर्ने कमलाका श्रीमान बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा करिब १५ महिना पहिले दुवई गएका छन् । उनी ११ बर्षे छोराको साथमा घरमा भएका बेला घटना भएको हो ।
Prevपोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि बेहोस, ३ घन्टाभित्र मृत्यु बुहारी भन्छिन्– हाम्रो परिवारलाई परेकोजस्तो अरुलाई नपरोस्
Nextएकै मानिसका १३ श्रीमती, ती पनि एकैसाथ गर्भवती !
एकैदिन ३ हजार ६ सय ३७ संक्रमित थपिए, कुल संक्रमितको संख्या डेढ लाख नजिक पुग्यो
आज भदाै २७ गते शनिबार, कस्ताे छ आजकाे दिन हेर्नुहाेस् राशिफल
‘हावा खाऔँ भन्दै जङ्गल लगे, मोटरसाइकलमै पछाडिबाट घाँटी रेटे’ (1155)
मैले बिसौँ तिजका निराहार व्रत बसेकी छु तिम्रो लागि : मनोज तिमी उठ, “छोराछोरी तिम्रो बाटो कुरेर बसेका छन्” (987)
मलाई घरमा बोलाएर उसले शारीरिक सम्पर्क राखेर त्यसपछि… (880)
WHO भन्छ : अब सकियो कोरोनाको त्रा’स, पहिलो सफल परीक्षण भएको खोपले ९० प्रतिशत सु र क्षा दियो (806)
दुई छोरा गुमाएका बुवाले भने : ‘बुहारीलाई मेरै हातले बिहे गरिदिन्छु, छाेरालाई डिप्रेशन थियाे, राँची लगेर ल्याएका थियाै’ (भिडियो) (788)
काग तिहारको दिन यी वस्तु किन्दा मिल्छ लक्ष्मीको साथ ! राशि अनुसार के किन्ने के नकिन्ने ? (788)
त्यसपछि श्रीमानको टाउको प्लाष्टिकमा बोकेर जाँदै थिईन्… (770)
ऋणले निम्त्याएको विनाश: जसले आत्महत्या मात्र गरेनन् श्रीमतीसँगै छोरा र कुकुरको समेत हत्या गरे (758)
कुर्कुचा फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? यो हो निको पार्ने विधि घरेलु बिधि ! (752)
छोराको बिवाह गरेर ल्याएको ४ दिन पछि नै ससुरा र बुहारीबीच अ’नै’ति’क स’म्ब’न्ध, सासुले देखेपछि घटना खुल्ने ड’रले वि’ष खु’वा’ए (भिडियो हेर्नुस्) (723)